यी डाक्टर, जो बिरामी भेट्न घरमै पुग्छन्
नेपालगन्ज- बाँके कोहलपुरकी माधुरी महर्जन गत बुधबार राती ३ बजे गम्भीर अवस्थामा भेरी अन्चल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगिन्।
अस्पताल पुग्नासाथ चिकित्सकले माधुरीलाई सर्पले टोकेको आशंका गर्दै उपचार सुरु गरे।
अस्पतालका चिकित्सक डा कृष्ण आचार्यसहितका स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले माधुरीको उपचार सुरु गर्योा। अवस्था गम्भीर भएकाले तत्कालै भेन्टिलेटरमा राखियो। २२ घन्टासम्म लगातार भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरेपछि स्वास्थ्यमा सुधार हुँदैं गयो। माधुरी ४ दिनपछि घर फर्किन्। अहिले उनी घरमै बसेर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेकी छन्।
माधुरीको उपचार गर्ने डा. आचार्य एनेस्थेसिस्ट डाक्टर हुन्। उनको मुख्य जिम्मेवारी शल्यक्रिया गर्दा बिरामी बेहोस बनाउने, उनीहरुको दुखाइ कम गर्ने र गम्भीर किसिमका बिरामीलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्ने हो। तर आफ्नो जिम्मेवारीमा नपर्ने भएपनि डा. आचार्य सर्पदंशको उपचारमा ३ बर्षदेखि सक्रियताका साथ लागेका छन्।
उनी अस्पतालको आइसियु कक्षसँग जोडिएको अस्पतालको क्वार्टरमा बस्छन्। कुनै पनि सर्पदंशका बिरामी अस्पतालमा आएको खबर पाएको ५ मिनेटभित्रै अस्पतालमा पुगेर बिरामीको उपचारमा संलग्न हुन्छन्।
गम्भीर बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको मोनिटरिङका लागि राती २/३ बजे पनि उनी आइसियु पुग्छन्।
अधिकांश बिरामी सरकारी अस्पतालको ओपीडी समयमा टिकट काटेर जचाँउन चाहँदैनन्। यसो हुनुको मुख्यकारण प्रष्टै छ –ओपीडीमा अधिकांश बिरामीले डाक्टरबाट राम्रो रेस्पोन्स पाउँदैनन्। डाक्टरसँग राम्ररी जचाउँन प्राइभेट क्लिनिकमा चर्काे शुल्क तिरेर भेट्नैपर्छ।
मध्यरातमा सरकारी अस्पतालमा भेटिएका डा. आचार्यलाई भने माधुरीकी दिदी सिर्जनाले निकै फरक पाइन्। ‘डाक्टरले आफ्नै परिवारका सदस्यजस्तै ठानेर निकै मिहिनेतका साथ उपचार गर्नुभयो, राम्रोसँग उपचार भईरहेकाले छिट्टै निको हुन्छ भनेर हौसला दिनु भयो,’ सिर्जनाले भनिन्।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि डाक्टरले फोन गरेर अवस्थाका बारेमा सोधपुछ गरिरहे। कृुरा त्यतिमा मात्र टुंगिएन। डा. आचार्य आफँै बिरामी भेट्न माधुरीको घर पुगे। यसले परिवारलाई निकै खुशी तुल्यायो। ‘हामी निकै खुसी र उत्साहित छौं। घरमै आएर डाक्टरले माधुरीको चेकजाँच गर्नुभयो, सर्पले टोकेको बेला माधुरी सुतेको ठाउँ हेर्नुभयो। सर्प कहाँबाट कसरी आएर उनलाई टोकेको होला भनेर परिवारका सदस्यसँग छलफल गर्नुभयो । खाटमा झुल लगाएर सुत्न सल्लाह दिनु भयो,’ माधुरीकी दिदी सिर्जनाले भनिन्।
माधुरीका हजुरबुवा मुक्तबहादुर आफ्नी नातिनीको उपचारमा डा. आचार्यले देखाएको हार्दिकताबाट दंग छन्। हाम्रो परिवारका लागि त डा. आचार्य त भगवान नै हुन्। सरकारी अस्पतालमा यस्ता डाक्टर भए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो, धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो,’ मुक्तबहादुर भन्छन्।
डाक्टरले महिनावारी भएका बेला पनि परिवारका महिला सदस्यलाई घरभित्रै खाटमा झुल लगाएर सुत्ने व्यवस्था नगर्दासम्म सर्पदंशको जोखिम हुने पनि परिवारलाई बताएका छन्। ‘अबदेखि हामीले महिनावारीका बेला महिलाहरुलाई घर भित्रकै एउटा कोठामा सुत्ने व्यवस्था गर्छौं,’ मुक्तबहादुरले भने।
महिनावारी भएका बेला घरभित्र खाटमा सुत्न नपाइने चलनकै कारण माधुरी सर्पदंशमा परेको सिर्जनाले बताइन्। ‘डा. साबले भनेपछि हजुरबुवालगायत परिवारका सदस्यहरुले महिनावारीका बेला महिलाहरुलाई घरभित्रकै एउटा कोठामा सुत्न बस्ने व्यवस्था गरिदिन्छौं भन्नु भएको छ जसबाट हामीहरु अन्य महिलाहरु पनि सुरक्षित भएका छौ,’ उनले भनिन्।
माधुरीमात्रै होइन, डा. आचार्य आफूले मिहिनेत गरेर बचाएका बिरामीको अबस्था बुझ्न आफँै बिरामीको घर–घर पुग्छिन्। उनी भन्छन्, ‘मैले उपचार गरेर बचाएका बिरामीलाई मौका मिल्नासाथ आफँै उनीहरुका घर पुगेर भेट्ने गरेको छु।’ उनको यो अभियान २०७४ जेठदेखि सुरु भएको हो। एक बर्षको अबधिमा बर्दियाको गुलरिया, बाँसगढी, बढैया ताल, बाँकेको कोहलपुर खजुरा क्षेत्रका १५ बिरामीलाई उनीहरुका घरमै गएर भेटेका छन्।
बिरामीलाई घरमै गएर भेट्ने, परीक्षण गर्ने, आवश्यक सल्लाह दिने गर्दै आएका छन्। बिशेषगरी सर्पदंशबाट हुनबाट कसरी बच्ने, भईहाले कस्ता सर्तकता अपनाउने जस्ता बिषयमा बिरामी र उनका छिमेकीसँग छलफल र अन्तक्र्रिया गर्दै आएका छन्। त्यसले सर्पदंशको जोखिम कम गर्न धेरै नै फलदायी हुने गरेको उनको अनुभव छ।
सर्पदंशका बारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने अभियानमा उनलाई उनैले उपचार गरेर निको पारेका बिरामीले सहयोग गरिरहेका छन। बिरामीलाई भेट्न उनीहरुका घर जाँदा बिरामी तथा उनका आफन्तले देखाउने हार्दिकताले सर्पदंशका क्षेत्रमा थप काम गर्ने उर्जा मिलेको डा. आचार्य बताउछन्।
गर्मी र बर्षातको शुरुवातसंगै सर्पदंश (स्नेक बाइट)का बिरामीको संख्या बढन थालेको छ। यो बर्ष सर्पदंशका २२ बिरामी उपचारका लागि नेपालगन्जको भेरी अन्चल अस्पताल आइसकेका छन्। पछिल्ला दिनमा दैनिक औसतमा २ जना बिरामी आउने गरेका छन्। असार, साउन र भदौ सर्पदंशका लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण महिना हुन्।
भेरी अन्चल अस्पतालमा उपचारका लागि आएका २२ बिरामीमध्ये २ जना बिषालु सर्पदंशका बिरामी भएको डा. आचार्यले बताए।
गतबर्ष भेरी अन्चल अस्पतालमा सर्पदंशका ४ सय ७५ बिरामी आएका थिए। तीमध्ये १ सय ३५ जना बिषालु सर्पले टोकेका बिरामी थिए। अस्पतालले १ सय २० जनालाई आइसियु र ६० जनालाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरेको थियो। अस्पतालमा उपचारका क्रममा २ जनाको मृत्यु भएको थियो। २०७१ सालको तुलनामा २०७२ सालमा सर्पदंशबाट हुने मृत्यु आधा घट्यो। २०७४ सम्म सर्पदंशबाट हुने मृत्युको संख्या निकै घटेर २ मा झरेको छ।